TRSB Igwe Mkpanaka
Nkọwapụta ọkụ ọkụ kwesịrị ikwekọ n'ụkpụrụ IEC / GB, ụdị prodection ọ bụla nwere mkpanaka ọkụ dị iche iche dị elu. Nhazi na Inkpụrụ Na mbụ iji gbochie mkpanaka àmụmà nke exciter na ngosiputa na mkpokọta mkpara na-a gwara mmanụ. Ọnụ nke ihe na-akpali akpali na ngosiputa nwere usoro pụrụ iche, na-enye ume ma na-echekwa ike site na okike ọkụ eletrik. Ngosiputa na àmụmà iji jikọọ ọma na ụwa na otu nwere.
Igbe TRSX Lightning
Okwu mmeghe TRSX usoro ike mkpuchi igbe mkpuchi bụ nke a na-ejikarị maka ihu igwe, njem, post na telekomunikashions, netwọkụ kọmputa, igbe nkesa ike, ebe obibi, ụgbọ oloko na mpaghara ndị ọzọ. na IEC (mba electrotechnical ọrụ) nkebi nke àmụmà nchedo, n'ikuku ana enweta n'otutu-levelprotection tiori, klas B bụ ndị mbụ larịị nke àmụmà echebe àmụmà nchedo ngwaọrụ, nwere ike ...